Sida loo ogaado haddii aad bidaar yeelan doontid da'daada yar: astaamaha iyo talooyinka | Ragga Stylish
Inteena ugu badan ragga waxaynu leenahay aayatiin guud: bidaar. Waxaa jira calaamado muujinaya barashada sidee lagu ogaadaa inaad bidaar yeelan doontid da'daada yar ama maya. Waa inaan maanka ku haynaa in qof walba uu ka duwan yahay waana inaan qiimeyno fikradaha iyo astaamo badan oo na ogeysiin doona goorta aan bidaar yeelan doonno.
Maqaalkan waxaan ku baran doonaa sida loo ogaado haddii aad bidaar yeelanaysid oo aad aqoonsanaysid astaamaha hore ee ay u leeyihiin.
1 Sida loo ogaado haddii aad bidaar yeelan doontid da'daada yar
2 Da'da uu timaha daadanayaa bilaabmayo
3 Sida loo ogaado haddii aad bidaar yeelaneyso markii aad yartahay: xooji folliciyada
Hidda-wadayaasha ayaa door aasaasi ah ka ciyaari kara tan. Hidda-wadahayaasha ayaa ah kuwa go’aamiya timo luminta waxaana laga dhaxli karaa qoyska aabaha ama hooyada. Kobaca timaha waxaa nidaamiya qiyaastii 200 hiddo-wadayaal kala duwan, marka lagu daro kuwa aabaha iyo hooyada maahan inay raacdo qaab isku mid ah walaalka kale. Waxaas oo dhami waxay ka dhigan yihiin in isla qoyska dhexdiisa dadka qaar ay bidaar yeelan karaan kuwa kalena aaney yeelan karin. Sidoo kale waa inaad tixgelisaa da'da ay tani dhici doonto.
Fiirinta sawirrada awoowayaasha ayaa ahayd habka ugu saxsan ee lagu go'aamiyo fursadaha timo luminta da 'yar oo tobaneeyo sano ka hor ah. Si kastaba ha noqotee, maanta waxaan haynaa habab badan oo cilmiyaysan oo sax ah. Dhakhtarku wuxuu tijaabada DNA ka qaadi karaa dhareerka ku ururaya dhabannada iyo waxay muujin doontaa sida aad ugu nugul tahay hoormoonka qarsoon dhammaan testosterone ee jirka. Hormoonkan waxaa loo yaqaan magaca dohydrotestosterone, oo si kooban loo yaqaan DHT. Muunadan candhuuftu kaliya ma ogaan doonto inaad bidaar leedahay, laakiin sidoo kale waxay saadaalin kartaa sida aad uga fal celin doonto daawooyinka kala duwan ee loo isticmaalo daaweynta timo luminta loo yaqaan alopecia
Waxaa laga yaabaa inaad leedahay dhaxalka xasaasiga ah ee DHT iyo bidaartu waxay bilaaban kartaa isla marka ay qaangaadhnimadu dhammaato. Maaha soosaarka DHT midda, laakiin xasaasiyadda isla hoormoonka aad ka dhaxashay qoyskaaga. Kuwa leh dareenka ugu sarreeya waxay ahaayeen kuwii ugu horreeyay ee la kulmay daciifinta xididdada taasoo keentay iftiiminta aagga taajka iyo muuqaalka nasashada wejiga. Midabaynta timaha badanaa way fududahay kuwa leh astaamaha pre-alopecia. Waxaa jira dabeecado qaarkood maalinba maalinta ka dambeysa oo kordhin kara soosaarka DHT kaasoo kordhiya fursadaha timo luminta.
Caadooyinkaas waxaa ka mid ah inaan sigaar cabno, walwal joogto ah, tallaalada steroids iyo testosterone si aan wax badan uga qabanno jimicsiga. Cuntada dheeriga ah sida creatine ayaa aad loola xiriiriyaa alopecia, laakiin daraasado cusub ayaa shaaca ka qaaday in wax dhibaato ah aysan ka jirin.
Da'da uu timaha daadanayaa bilaabmayo
Mid ka mid ah siyaabaha lagu ogaan karo inaad bidaar yeelan doontid waa inaad ogaatid da'da aad ku bilaabeysid timahaaga. Mid ka mid ah shantii ninba wuxuu bilaabaa inuu la kulmo timo lumis weyn 20s. Boqolkiiba waxay u kordhaan si isku mid ah markay dadku sii gaboobaan. Badanaa kororka ayaa u dhigma da'da. Tusaale ahaan, da'da 30 jir waxaa horeyba u jiray 30% ragga timaha ka dhaca. Xisaabintaani waxay si gaar ah run ugu tahay kuwa sii gaboobaya oo timo lumintu waa saami. Haddii aad gaarto da'da dhexe oo aad haysatid in badan oo timahaaga ah adiga oo aan waxba naftaada ku samayn, dareenkaaga u gaarka ah DHT ayaa u badan inuu hooseeyo. Sidaa darteed, waxaad yeelan doontaa qaab aad u gaabis ah oo timo lumis ah markaad gabowdo.
Calaamadaha timaha oo si tartiib tartiib ah u lumiya way adag tahay in la ogaado ilaa ay goori goor tahay. Haddii aad aragto in wejigaagu sii ballaaranayo oo timahaagu kaa dhacayaan awoodda hareeraha taajka, kuwani waa astaamaha ugu cad cad. Waxa kale oo suurtagal ah in dayrta si isku dheelitiran loo siman yahay. Noocyada noocaan ah waxaa badanaa loogu yeeraa bidaar aan muuqan. Xaaladahan, timuhu way sii yaraanayaan oo sii yaraanayaan ilaa ay ka muuqanayaan isha qaawan. Timo beelidu waa xaalad joogto ah oo horumar leh oo kasii daraysa kana sii daraysa haddii aan la daaweyn.
Waxaa jira siyaabo loo xakameeyo bidaarta aan la arki karin. Waxaa jira habab qaar oo lagula socdo horumarka timo luminta muddada-dheer. Waa xisaab xir xilliyeed soo jiidan kara aragti hoos u dhac muddo dheer leh isla markaana bixisa tillaabooyin kala geddisan si aanu ninku bidaarta ugu deg degin. Ragga bidaarta leh badankood ma lumiyaan timaha dhinacyada iyo dhabarka madaxyadooda, waxayna xitaa sharraxaan sababta xididdadaasi ay ugu difaacayaan DHT.
Sida loo ogaado haddii aad bidaar yeelaneyso markii aad yartahay: xooji folliciyada
Mid ka mid ah daaweynta ugu caansan ee la yaqaan waa in la xoojiyo xididdada waxayna la mid tahay tan joojinta dayrta. Si fiican looma garanayo tan ka wanaagsan haddii la xoojiyo xididdada aad horay u haysatay ama in la joojiyo timo luminta. Iyadoo aan loo eegin sida aad ugu nugul tahay DHYT, waxaad u badan tahay inaad la kulanto waxoogaa timo ah dhakhso ama goor dambe. Waxaas oo dhami waa qayb ka mid ah koritaanka iyo gabowga. 90% ragga 90 jirka ah waxay leeyihiin timo aad ugayar sidii ay yaryihiin. Si kastaba ha noqotee, waad yareyn kartaa xaddiga timo luminta, annaguna kama hadlayno oo keliya propecia ama transplant.
Tallaabada ugu horreysa ee looga hortagayo in daahku uusan soo dhicin waa inaad seexataa saacadaha kugu habboon maalin walba si joogto ah. Way fiicantahay in la yareeyo aalkolada iyo tubaakada maaddaama ay yihiin walxo wax u dhimaya soosaarka fiber-ka timaha. Wuxuu sidoo kale kugula talinayaa inaadan qaadanin fikradaha qaarkood sida antihypertensives, hormoonada daaweynta iyo isbeddelada niyadda sida Waxay yihiin dawooyinka lidka diiqadda iyo kaniiniyada walaaca. Ku dhajinta dhammaan isbeddeladan habka caadiga ah daaweynta qaarkood waxay noqon kartaa xal wanaagsan. Markaad sameyso mid ama labada shay, waxaad bilaabi doontaa inaad dareento cimri dherer timahaaga.
Xaqiiqdii waad sii waayi doontaa xijaabka si tartiib tartiib ah laakiin si isku mid ah uma sii ahaan doontid mar dambe.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan sida loo ogaado haddii aad bidaar yeelaneyso markii aad yartahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Caafimaadka » Sida loo ogaado haddii aad bidaar yeelan doontid da'daada yar
Sidee loo siiyaa sunnayaasha